Iplastikhi yombhobho odityanisiweyo wombhobho weplastikhi - China Umenzi wentsimbi yeplastiki odityanisiweyo, abaXhasi
ityhubhu yentsimbi yentsimbi yombhobho wamandla
Uncedo lweMveliso has Inokuzinza okuhle kobushushu kunye nokumelana nefuthe. Ngaphantsi kweemeko zeedigri ezili-110 kunye noxinzelelo lwendalo esingise kwi-1.9 MPa, kuvavanywe iiyure ezingama-8760 ngokwemigangatho yamanye amazwe. Kwafunyaniswa ukuba umbhobho awunakuvuza okanye umonakalo. Umbhobho we-PE-RT unokuthintela ukungqubana kunye nefuthe kumbhobho ngexesha lokwakha, kwaye unentsebenzo yexabiso elungileyo. Has It has iingenelo ubunzima ukukhanya, ubomi inkonzo ende, bhetyebhetye elungileyo kwaye kulula ukugoba. Xa kuthelekiswa ne-XPAP, ...
Ubushushu-enganyangekiyo polyethylene umbhobho edityanisiweyo kunye enemingxuma intsimbi perforated
Umbhobho owenziwe kwangaphambili we-thermoprotected polyethylene luhlobo olutsha lombhobho wokufudumeza, oqukethe umbhobho osebenzayo (kubandakanya izixhobo), i-polyurethane engqongqo yokugquma i-Foam, iqokobhe lokukhusela i-polyethylene yokudityaniswa okusondeleyo kokubumba. Njengokuba abathathu bengumzimba omnye, bangcwatywa ngqo emhlabeni, uxinzelelo lokunyusa ubushushu olubangelwa lutshintsho lobushushu kumbhobho wangaphakathi ugqithiselwa kumaleko wokugquma i-polyurethane. Umbhobho wangaphandle, ophantsi kwengxabano yomhlaba, ugqithisiwe ...
Ityhubhu yentsimbi eyenziwe ngombala yentsimbi eyenziwe ngombhobho odibeneyo wokuhambisa amanzi
Umbhobho wentsimbi ogqityiweyo wenziwe ngombhobho odityanisiweyo kukwenza imingxunya ngesantya esiphezulu kwiipleyiti zentsimbi ezibhityileyo ezikumgangatho ophezulu, kwaye yenziwa imibhobho yentsimbi ebhityileyo enemingxunya yi-argon arc butt welding ukuze ibe kukuqiniswa. Iplastiki ikhutshelwa ngaphakathi nangaphandle kwemibhobho yentsimbi ebhityileyo enemingxunya. Iplastikhi eludongeni lwangaphandle ludibene ngokuqinileyo kunye nomnye ngokusebenzisa ii-pores ukwenza konke ngombhobho wentsimbi oqinisiweyo. Inkqubo yemveliso imi ngolu hlobo lulandelayo: umcu ...